Ururada wax soo saarka Mive, waaxda velayat ee Maamulka Wershadaha Cuntada ee Wasaaradda Beeraha iyo Ilaalinta Deegaanka ee Turkmenistan, waxay sii wadaan inay helaan baradhada iyo basasha ay soo saareen soosaarayaasha beeraha gudaha.
Nadiifintooda ayaa bilaabatay Juunyo waxayna socon doontaa ilaa badhtamaha July, wargayska Neutral Turkmenistan ayaa weriyay.
Sida uu sheegayo Sharciga Janaayo ee Madaxweynaha Turkmenistan, 11100 hektar ayaa loo qoondeeyay baradhada, taas oo la qorsheeyay in lagu helo 155400 tan oo dalag ah. 3800 hektar ayaa loo bixiyay basasha, kaas oo laga filayo goynta 95000 tan. Iyada oo la tixgalinayo in cimilada oomane ah aysan kufiirin ku filnaan beeritaanka labadan dalag, gobolka wuxuu u qoondeeyaa goobo dheeraad ah waxsoosaarkooda sanad walba. Sannadkan waxay sameeyaan 2500 hektar.
Sida ku xusan Maamulka Wershadaha Cuntada ee waaxda bey'adda, qayb ka mid ah goosashada ayaa isla markiiba tagaya tafaariiqda. Qeybta kale waxay tagtaa xarumaha dhowr wasaaradood, oo ay ku jiraan waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo warshadaha caafimaadka, hayadaha fulinta sharciga, taas oo ah, xarumaha ay maalgaliso dowlada - xanaanada, iskuulada, unugyada militariga, kuwaas oo hada hela dalagyo waxtar u leh wax soo saarka gudaha ee dalaga hada jira. Inta soo hartayna way kaydsan yihiin. Isla mar ahaantaana, buuxinta ugu weyn ee bakhaarada khudradda "xilliga qaboobaha" ayaa bilaaban doona bisha Oktoobar oo ay weheliso karooto iyo kaabash. Halkaana waxaa ku jira mugag kaydinta la hagaajin karo, sahay istiraatiiji ah oo jiilaal ah oo ka badan 20000 tan oo baradho ah iyo basasha. Isku soo wada duuboo, qaab dhismeedka wasaaraddu wuxuu leeyahay toban qol oo bakhaarro ah oo leh awood fudud oo qabow iyo si qabow u qaboojin karo. Waxaa jira walxahaas oo kale gobollada oo dhan. Sanadihii la soo dhaafay, gobolo waaweyn oo waaweyn ayaa laga dhisay gobollada - Lebap, Dashoguz, Mary - oo loogu talagalay inay dejiso saddex kun oo tan oo ah khudradda iyo qaraha, iyo Akhal - 2000 oo tan oo ah miraha iyo khudradda. Guud ahaan, buugga 'Akhal oasis' wuxuu leeyahay aag loogu talagalay in lagu keydiyo 14 kun oo tan oo dalag ah, taas oo tixgelinaysa sahayda caasimadda. Bakhaarada gobolka ee gobolka Balkan waxaa loogu talagalay inay kaydiso kun tan oo ah dalagyada khudradda.
Qeybta libaaxa ee wax soo saarka beeraha ayaa iska leh qeybta gaarka loo leeyahay, si kastaba ha noqotee, dowladdu waxay maamushaa tayada badeecadaha soo gala suuqa. Aqbalitaanka kaydinta khudradda iyo miraha waxaa lagu fuliyaa iyada oo ay kaqaybgalayaan khubaro ka socota sheybaarada tayada leh. Tusaale ahaan, baradhada waxaa loo qaadaa cabir gaar ah, qiimaha wax iibsigu wuxuu kuxiranyahay. Intaa waxaa u dheer, qaabkeeda kiimikada ayaa la baarayaa. Muga wax soo saarka qandaraaska waxaa lagu qeexay qorshaha sanadlaha ee gobolka ee dhulbeereedka beero, kaas oo, marka la eego, lagu saleeyo xisaabinta waxsoosaarka dalaga iyo kala duwanaanshaha ciidda iyo xaaladaha cimilada ee velayats, waana tuse loogu talagalay khabiiro ka socda waaxaha qaab dhismeedka wasaaradda. Dukumintigaan waxaa loo aruurinayaa iyada oo lagu saleynayo Xeerka Janaayo ee Madaxweynaha Turkmenistan, hirgelinta kaas oo lagu siinayo heshiis ku saleysan - kireystayaasha, daikhan ururada iyo beeruhu waxay heshiis la galaan khyakimliks iyagoo iskaashi dhow la leh waaxda cilmiga xoolaha. Sidaa darteed beerista mugga loo baahan yahay ee waxyaabaha cagaaran iyo dalaga xididka, oo ay ku jiraan xididdada sokorta, waa farsamo loo qorsheeyay. Isla mar ahaantaana, heshiisku waa waajib saaran in la beero dalagyada, taas oo kiraystuhu, haddii uu doonayo, uu ku wareejin karo dawladda ama uu u iibiyo si madaxbanaan.
Haddii loo baahdo, waaxda bey'adda, markii ay codsato maamulka velayat, waxay siineysaa beeraleyda qalab abuur, iyo sidoo kale xirmo dhan oo makaanik ah, beero-kiimiko iyo adeeg teknolojiyadeed, oo ay weheliso waraabinta dhul beereed shuruudaha ku habboon. Wax soosaarka maxalliga ahi wuxuu ku koray duruufaha deegaanka u wanaagsan, oo aan lahayn teknoolojiyadda GMO, maxaa yeelay macaamilku wuxuu doorbidayaa miraha iyo khudradda ku koray Turkmenistan, iyagoo ku doodaya inuu danaynayo qiimaha iyo tayada deegaanka.
Sannadkan baradho ayaa lagu beeray meelkasta oo mar kale - badhkii labaad ee xagaaga. Markii hore, dhaqankan wuxuu khuseeyay khudaarta shaqsiyeed, iyo sidoo kale cawska laga soo saaray digiraha, taasoo qani ku ah ciidda kadib goosashada. Madaxa dawladdu wuxuu naga codsanayaa inaan ku celcelinno dalagga; Beeridda baradho ee baradho ah, oo ku xidhan cimilada diiran, waxay bilaabataa badhtamaha bisha Febraayo, 90 maalmood ayaa loo oggol yahay koriinsashada dalagga, in kasta oo ay jiraan noocyo hore u bislaaday. Sida abuurka, Sante-hore u bislaada, caan ku ah dalka, wuxuu siinayaa baradho wareegsan oo leh diiri huruud ah.
Tags: baradho korayawax soo saarkaSomaliland